Shiinaha T8 tube withrada Soo saaraha iyo Alaab-qeybiye | Aina
9W / 18W G13 Microwave Motion Sensor T8 wuxuu hogaamiyay Laydhka Tube-ka ee Goobaha Baarkinka dhulka hoostiisa
T8-kan ayaa laydhadhka tubbada dib-u-habeynta isticmaala wuxuu adeegsadaa nidaam lagu ogaanayo shucaaca, wuxuu soo saaraa dhalaalka 900 lumens, wuxuu leeyahay 30.000 saacadood oo cimri ah iyo coms oo leh dabool translucent ah.
Waad ku mahadsan tahay dareemaheeda radar-ka isku-dhafan, nalka ayaa daaraya markasta oo uu dhaqdhaqaaq ka ogaado xagal 180 ° iyo masaafo dhan 8 mitir. Tuubbadu way xirmaysaa markii aan wax dhaqdhaqaaq ah laga helin inta udhaxeysa (180 ° iyo 8 mitir), oo 30 ama 40 ilbiriqsi ay dhaafeen.
Waxa ugu dambeeya ee iftiiminta tuubbada tamarta ku habboon
Iftiin buuxa marka dhaqdhaqaaqa la ogaado inuu hoos ugu dhacayo illaa 20% dhalaal (ama ka baxsan 0%) oo uu ku jiro qaab-suge (dhaqdhaqaaq la'aan).
In-dhisay microwave mooshinka shidma.
Aad uga waxtar badan dareemayaasha PIR ee hore.
Si fudud loo rakibo, All Tube LED waxay ku habboon tahay qalabkaaga iftiinka dhaadheer ee T8.
Poly-carbonate iyo aluminium dhismaha.
Beddelka tamarta hoose ee fiidmeerta heerka caadiga ah
Naqshad jilicsan: waxay bixisaa xalka ugu casrisan oo casri ah dagaalada dhaqanka
Awood 9W / 18W Gelinta AC85-265V
CCT 2700-6500K LPW 100LM / W
Cabir 2FT / 4FT Ra 80
Xidhmada 1200mm 125x21x21cm Tirada 36pcs / kartoon
Xidhmada 600mm 65x21x21cm Tirada 36 kumbiyuutarro / kartoon
Waxay ku habboon tahay codsiyada gudaha sida Corridor, armaajo, hallway, Jaranjarooyinka, sariirta guriga, Qeybta hoose, Warehouse, waddo weyn, Kabadhka, Bakhaarka, Musqusha, Musqusha, Qolka Carruurta. iwm
Codsiyada ganacsiga waxaa ka mid ah dukaamo, xafiisyo, bakhaarro, qolal bakhaarro, aqoon isweydaarsiyo, dariiqyo xarig ah, saldhigyo iyo kaydad.
Keydinta Tamarta 30% -45%
Bilaabis dhakhso leh, buuq la'aan, heerkulka shaqada oo hooseeya, isticmaalka tamarta oo hooseeya.
U dhow iftiinka dabiiciga ah ee ufiican indhahaaga.
Iftiinka qaybta ayaa aad u ballaadhan waxayna caawin kartaa abuuritaanka iftiinka labaad.
Hore: EmergencyT8 Tube
Xiga: Frame Crystal Tube
Q1. Ka waran waqtiga hogaanka?
A: Muunad waxay ubaahantahay 3-5 maalmood, waqtiga wax soosaarka cufnaanta wuxuu ubaahanyahay 1-2 toddobaad usbuuc tiro.
Q2. Ma caadi baa in la daabaco astaanteyda alaabta nalka laydhka?
J: Haa. Fadlan si rasmi ah noogu soo sheeg ka hor intaan wax soo saarkeenu dhicin oo aan xaqiijinno naqshadeynta marka hore
ku saleysan muunadeena.
Q3: Sidee loola macaamilaa cilladaha?
J: Marka hore, alaabtayada waxaa lagu soo saaraa nidaamka xakamaynta tayada adag iyo cilladaysan
sicirka wuxuu ka yaraan doonaa 0.2%.
Marka labaad, inta lagu jiro muddada dammaanadda, waxaan soo diri doonnaa laydhadh cusub oo leh amar cusub oo tiro yar.
Waxyaabaha dufcadda cilladaysan, waanu dayactireynaa oo dib ayaan kuugu soo celin doonnaa ama waan awoodnaa
ka wada hadlaan xalka oo ay ku jirto dib-u-wicitaan iyadoo loo eegayo xaaladda dhabta ah.
Tuubo iftiin qabow leh oo qabta tuubada
Tuulada G13 T8 7000K